Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. ‘स्वर्गको टुक्रा’ मा सरकारी पूजा :: Lumbinitimes
आइतबार, असोज ३, २०७८ लुम्बिनी टाइम्स
बाजुरा: बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर भएदेखि नै बिहान र साँझ उकालो–ओरालो मज्जैले हिँड्न थालेको थिएँ । एकप्रकारले यो मेरो बडीमालिका जाने पूर्वतयारी थियो ।
दुई महिना नहुँदै ढाड दुखेर हैरान, हिँड्नै कठिन हुन थाल्यो । जिल्लामा उपलब्ध डाक्टरकहाँ जचाउँदा आराम गर्नुपर्ने सल्लाह दिए । हिँड्डुल पनि बन्द भयो । बडीमालिका जाने रहर यत्तिकै तुहिएला जस्तो लाग्न थाल्यो । साउन दोस्रो साता काठमाडौं गएका बेला जचाउँदा डाक्टरले ढाडको नसा च्यापिएको बताए । केही औषधि र थेरापी सकेर फर्किएँ ।
जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिनको पूजामा देशका विभिन्न भाग र भारतबाट समेत तीर्थालु जान्छन् । यो समयमा डोटी, जुम्ला र बाजुराबाट सरकारी टोली जानुपर्ने प्रचलन छ । डोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जाने टोलीले गोरखनाथको मन्दिरबाट तथा जुम्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले चन्दननाथको मन्दिरबाट विशेष पूजा सामग्री लिएर जानुपर्ने रहेछ ।
बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विशेष केही लिएर जानु पर्दैन । तैपनि बडीमालिकामा हुने पूजाको अघिल्लो दिन कालीकोट र बाजुराको सिमानामा पर्ने त्रिवेणीधाममा हुने पूजा तथा बडीमालिकामा हुने पूजामा समेत विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ ।
‘पहिलै थाहा भएको भए हजार–पन्ध्र सय जति पाँच–पाँचका नोट साटेर बोक्नुहुन्थ्यो’, मैले भने, ‘हरेकलाई कम्तीमा ६ रुपैयाँ सुनिश्चित गरिदिँदै डिएसपी सा’बले मुन्टो हल्लाएर हाँ मा हाँ मिलाए । पहिलो दिनको यात्रामा निकै कठिन उकालो रहेछ । करिब २१ किलोमिटर हिँडेपछि बास बस्ने ठाउँ ‘सोता’ पुगियो ।
हामी अन्य सबै यात्रुभन्दा चाँडो त्यहाँ पुग्यौं । यहाँ दुई÷तीनवटा गोठघर रहेछन् । हिउँदमा भैंसीबाख्रा गोठ लिएर आउने गाउँलेहरूले आफूलाई बस्न बनाएका घरहरू । पूर्वी पहाडमा लेकमा भैंसीपालेको थाहा थिएन मलाई । बाजुरामा लेकमा भैंसी नै पालिँदो रहेछ ।
बलबहादुर भाइ हाम्रो कार्यालयको स्टाफ अघिल्लो दिन नै सोता आइसकेका थिए, बास बस्ने र खीर खुवाउने व्यवस्था गर्न । उनले विगतकै जस्तो १५÷१६ जना होलान् भन्ने ठानेका रहेछन् । हामी सबै गरेर ४० भन्दा बढी थियौं ।
उपलब्ध जति दूध थियो सबैको खीर पाक्यो । अघाउँजी खाए १५–१६ लाई पनि पुग्नेवाला थिएन । मैले प्रतिव्यक्ति एक पन्यूको नियम बनाइदिएँ । धेरैलाई पुग्यो । नपुग्नेले र नअघाउनेले त्यहाँ पाकेको गहुँको रोटी पनि खाए । कतिपयले आफैंसँग भएको खानेकुरा ।
बलबहादुर भाइले हामीलाई त्यो गोठघरमै बस्ने प्रबन्ध मिलाएका रहेछन् । पानी परिरहेको थियो । रात परिसकेको थियो । यात्रु आउने क्रम जारी थियो । गोठघरमा आउनेले एकछिन भए पनि आगो ताप्न पाउँथे ।
हामी त्यहाँ नसुते अरु धेरैले सुत्न पाउने देखेर हामी टेन्टमा नै बस्ने भयौं । राति त झन् ठूलो पानी दर्कियो । धेरै साथीका टेन्ट चुहियो । बिहान अँध्यारै नउठे शौच गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । बिहानको झिसमिसे नहुँदै सबैको शौचकर्म सिद्धियो । सबै गरेर करिब दुई सयजना जति त्यो रात त्यहाँ बस्यौं ।
भोलिपल्ट फेरि उकालो यात्रा सुरु भयो । केही घन्टा हिँडेपछि भेटिन थाले विशाल पाटनहरू । भेंडाका बथानहरू । दौडिरहेका घोडाहरू । रंगीविरंगी फूलहरू । यतिञ्जेलको थकान हरायो, सबैका शरीरबाट । यात्रा गर्न पाएकोमा धन्य ठान्दै थाले, विभिन्न पोजमा फोटाहरू खिच्न ।
अघिल्लो साँझ सोता पुग्नै लाग्दा भेटिएको सानो पाटनलाई ‘यही रहेछ स्वर्ग’ भन्दै फोटा खिचेर रात पार्नेहरू चुकचुकाउँदै भन्न थाले, ‘हिजो व्यर्थमा खिचिएछ ।’
सोताबाट १७ किलोमिटर हिँडेपछि त्रिवेणीधाम पुगियो । १२ नबज्दै पुग्यो हाम्रो टोली । पुग्नासाथ दर्केको पानीले रसिलो स्वागत ग¥यो । टेन्ट गाड्ने स्थान पर्याप्त थियो । एकछिन घुम्यौ ।
खानलाई सोतामाजस्तो दुःख रहेनछ । केही संख्यामा अस्थायी होटल थिए । पकाउने मान्छेको सरसफाइ र भाँडाकुँडा धुने स्थान नहेरी खाने सल्लाह गरियो । अनि गहुँको रोटी र मटरचनाको झोल मजाले खाएर बेलैमा टेन्टमा छिरियो ।
जुम्लाबाट ल्याएको चन्दननाथको छत्र कालीकोटेहरूले खोसेर लैजाने र त्यो पूजाका लागि फिर्ता ल्याउने क्रममा कुटाकुटसमेत हुने गरेको प्रचलन थाहा पाइयो ।
सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक निर्देशन दिएकाले खासै ठूलो मारपिट हुन पाएन । त्रिवेणी बाजुरा र कालीकोटको सिमानामा भए पनि कालीकोटको मानव बस्तीबाट नजिक भएकाले यहाँ कालीकोटेहरूको संख्या उल्लेख्य हुँदो रहेछ । यहाँ प्रायः होटल पनि कालीकोटेकै थिए ।
पूजा सकेपछि बडीमालिकातर्फ लागियो । यो यात्रामा पनि बाटामा रमणीय पाटन रहेछन् । ठाउँठाउँमा असाध्यै अप्ठेरो बाटो । अलिकति चिप्लियो भने चिनोबानो नभेटिने भिर । केही ठाउँमा अप्ठ्यारो भए पनि यात्रा छोटो रहेछ । करिब ११ किलोमिटर मात्र हिँडेपछि पुगियो बडीमालिका माताको मन्दिर ।
मनको धोको पूरा भो । यसपालि अनिवार्य गर्नुपर्ने नित्य तथा विशेष पूजाबाहेक अरू पूजा तथा भिडभाड नहुने सूचना प्रसारण गरिएको थियो । तैपनि विभिन्न मार्ग भएर आउने यात्रुको भिड लागिसकेको रहेछ । मुस्किलले टेन्ट गाड्यौं । दर्शनार्थी साँझ पनि माताको दर्शन गर्दा रहेछन् । लामा लाइन थिए । हामीले पनि दर्शन ग¥यौं । र, भोलिको कार्यक्रमबारे पुजारीबाट जानकारी लियौं ।
५ भदौ बिहान उठेर खुला आकाशमुनिको शौचकर्म सिध्यायौं र तल बासुधारा झरेर पञ्चस्नान ग¥यौं । बिहानको राति १ बजेबाटै मन्दिरमा दर्शनार्थीको लाइन लाग्न थालेको थियो ।
अघिल्लो दिन दर्शन नगरेका प्रायः सबै र केही दोहो-याएर दर्शन इच्छा राख्नेहरू लाइनमा थिए । करिब ८ बजेतिर जुम्ला, डोटी र बाजुराका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिले पूजा आराधना गर्नुपर्दो रहेछ । यसलाई सरकारी पूजा भनिँदो रहेछ ।
अघिल्लो साँझ दर्शन गरेका धेरैजसो भोलिपल्ट बिहानै फर्किसकेका थिए । ५ भदौमा दर्शन गर्नेहरू पनि अधिकांश फर्किरहेका थिए । केही भने तिलक लिन बसेका थिए । नौ जना ब्राह्म्ण र सरकारी टोलीसमेत संलग्न भई होम गरिएपछि तयार हुने तिलक लिन दर्शनार्थीको लुछाचुँडी हुँदोरहेछ ।
यसपटक त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सल्लाह गरिएको भए पनि पूरै गर्न सकिएन । अलिअलि खोसाखोस भइहाल्यो । होम तथा पूजा सकेपछि पुजारी वर्गसँग बिदावरी भएर सदरमुकाम फर्कने क्रममा हामी नाट्येश्वरीतर्फ लाग्यौं ।
हाम्रो बसाइको व्यवस्था सामुदायिक वनले बनाएको भवनमा गरिएको रहेछ । प्रहरी भाइहरूले पकाएको खाना खाएर सुतियो । खुसीको खबर त्यो दिन हिँडेपछि पहिलोपटक भात खान पाइएको थियो ।
राति बाहिर जान परेमा टेन्टमा जस्तो निस्कन र भित्र आउन अप्ठ्यारो थिएन । त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय र नुहाउने धारा पनि भएकाले शौच तथा स्नानलाई धेरै सजिलो भयो ।
बिहान नाट्येश्वरीमा पूजाका साथै होमको शुभारम्भ पनि गरियो । केही समयपछि बलि प्रारम्भ भयो । मेलामा स्थानीयको भिडभाड भने निकै थियो । हामी भने खाना खाएर बाटो लाग्यौं । केही हिँडेपछि गाडी चढेर खोलासम्म जान पाइने रहेछ । खोलो तरेपछि साँफे मार्तडी सडक भेटिने र त्यहाँबाट आ–आफ्ना गन्तव्यतिर लाग्न पाइने भएकाले सबै उत्साहित भयौं ।
गाडी भेटिए पनि खोलासम्म गाडीमा जान र हिँडेर जान समय उति नै लाग्ने बुझियो । फेरि बाटो पनि धेरै अप्ठेरो भएकाले साथीहरूले गाडी चढ्ने रहर गर्नु भएन ।
मेरो भने ढाड तथा खुट्टा अचाक्ली दुखिरहेको थियो । मैले भने गाडी भेटिने ठाउँ पुगेपछि नहिँड्ने निधो गरें । गाडीमा भिड थियो । एकजना मित्रले खोलापारि चौकीमा छाडिदिने गरी मोटरसाइकल दिए । यात्राक्रममै भेटिएका कञ्चनपुर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष ओम बस्नेतले मोटरसाइकल चलाए ।
बाटो गतिलो नभएकाले ठाउँ–ठाउँमा ओर्लेर हिँड्दै खोलापारिसम्म पुग्दा पैदल हिँडेका साथीहरू त अघि नै पुगिसकेका रहेछन् । त्यसपछि मार्तडी जानेजति अम्कोटको पहिरोमा हिँड्यांै । पहिरोपारि गाडी आइरहेको रहेछ । चढेर एक घन्टामा पुग्यौं मार्तडी । यसरी पाँच दिनमा सम्पन्न भयो बडीमालिकाको रोमाञ्चक यात्रा ।
धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले सुदूरपश्चिमकै एक प्रसिद्ध स्थल भएर पनि पूर्वाधारका दृष्टिले धेरै नै ओझेलमा परेको रहेछ बडीमालिका क्षेत्र । पर्यटन बोर्डमार्फत होला सायद केही ठाउँमा ढुंगा छापिएको भए पनि पर्याप्त छैन ।
अप्ठेरा बाटामा रेलिङ, त्रिवेणी र बडीमालिकामा केही शौचालयहरू, बडीमालिकामा पानी तथा धारा र बिजुली प्रबन्ध गर्नैपर्ने देखियो । त्रिवेणी र बडीमालिकामा सुरक्षा प्रबन्ध बढाउन जरुरी देखे । वर्षमा दुई दिन मात्र नभएर जेठदेखि भदौसम्म यात्रा सम्भव हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ३, २०७८, १४:५९:००
हजुरआमाको तीज सम्झना: तीज आयो कि मन रुन्थ्यो !
अनि म कोरोना अस्पतालबाट भागेँ
कोभिड अस्पताल, संवेदनामैत्री संरचना र मेरो आमाको मृत्यु
बिहीबार, वैशाख २३, २०७८ लुम्बिनी टाइम्स
लकडाउनको एक वर्षः ताता सडकमा हिडेका ती पाइलाहरुको हिसाब हुन बाँकी नै छ
बुधबार, चैत ११, २०७७ लुम्बिनी टाइम्स